“မလာပါနဲ့၊ ဦးသိန်းစိန်ရေ မလာခဲ့နဲ့ ကွယ်” | Mizzima Myanmar News and Insight
“မလာပါနဲ့၊ ဦးသိန်းစိန်ရေ မလာခဲ့နဲ့ ကွယ်”
“မလာပါနဲ့” “ငါလျှောက်မယ့် ဘဝခရီးကြမ်းတယ် ကြုံတွေ့မယ့် အခက်အခဲ ဒုက္ခကျောက်ဆောင် မင်းရင်ဆိုင်ဖို့ ခက်တယ်…… မလာပါနဲ့ ………. အချစ်ရေ
မလာခဲ့နဲ့………. နင်မသိတဲ့ အပြင်က လက်တေ့ွဘဝဟာ အန္တရာယ် သိပ်များလွန်းတယ်……… မလာနဲ့ ……………….” ။
တခြား မတွေးပါနဲ့။ အိုင်းရင်းခရော့စ် တေးဂီတ အဖွဲ့ရဲ့ ပင်တိုင် အဆိုတော် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မျိုးကြီးရဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့ မလာပါနဲ့ ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲက စာသားပါ။ အခုလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ အဖွဲ့က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အဖွဲ့ကို မျိုးကြီး သီချင်းဆိုပြနေကြပါပြီ။ သူတို့ ဘယ်လို ဆိုပြနေကြသလဲ၊ ဘာအဓိပ္ပာယ် ဆောင်သလဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီအတွင်း ဘာဆက်ဖြစ်လာ နိုင်မလဲဆိုတာ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါ့မယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ပြည်သူ့ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ၏ “ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း” အပါအဝင် အလားတူ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုတဲ့ ဥပဒေကြမ်း (၇) ခု တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ပြောရရင် ဒီ ဥပဒေကြမ်း တင်ဖို့ လွှတ်တော်တွင်း စိုင်းပြင်းခဲ့သူဟာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ် ဦးတင်မောင်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်လိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ လက်ရှိ တည်ဆဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတနဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ဟာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရချိန်ကစ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလ တစ်လျှောက်လုံး ပါတီနိုင်ငံရေး မလုပ်ရဘူးလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ အကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် အရင် စစ်အစိုးရလက်ထက်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ဥပဒေ တွေမှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာချိန် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပါတီစည်းရုံးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ခွင့်ပြုထား တာဟာ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အတွက် အဲဒီအချက်ကို ပြင်ဆင်ဖို့ တင်သွင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အဲဒီ ဥပဒေတွေထဲမှာပါတဲ့ အချက်တွေကို ပြင်ဆင်မှု မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ မဲဆွယ် စည်းရုံးနိုင်မှာ ဖြစ်သလို ပါတီ နိုင်ငံရေးကိုလည်း လုပ်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်တဲ့ လွှတ်တော်ထဲက ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်တွေက ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ နိုင်ငံရေးပါတီ လုပ်ငန်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ လုပ်ကိုင်ခွင့် မရအောင် တားဆီးလိုတဲ့ သဘောလို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ ဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ပိုင်းမှာကတည်းက အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခု ပြင်ဆင်ဖို့ တင်ပြထားတဲ့ ဥပဒေပါ သမ္မတနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ ရွေးကောက်ပွဲနီးချိန် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ပါတီ စည်းရုံးရေး လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်၊ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ညီသလား၊ မညီဘူးလား ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ ခုံရုံးကို မေးမြန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ခုံရုံးကတော့ အခုမေးမြန်း တဲ့ ဥပဒေတွေဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်မပြုခင်က ပြဋ္ဌာန်းထားတာ ဖြစ်တယ်၊ သူတို့အနေနဲ့ စီရင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ဘောင်ထဲမှာ ရှိမနေဘူးလို့ အဖြေပေးပြီး ပြဿနာကို ရှောင်လွှဲသွား ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် ပြဿနာပေါ်တာက ဒီ ဥပဒေကြမ်း ပြင်ဆင်မှုတွေကို နဂိုက ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ် ဦးတင်မောင်ဦးက အမတ် တစ်ယောက်ချင်း အနေနဲ့ လွှတ်တော်ကို တင်သွင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း ပြင်ဆင်ချက် ဥပဒေကြမ်း တင်တော့ ပြည်သူ့ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အနေနဲ့ ပြောင်းလဲ တင်သွင်းတာကြောင့် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ တပ်မတော်သားအမတ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဌေးနိုင်က ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း ကော်မတီဝင် အများစုဆန္ဒအရ ဆိုပြီး သူရဦးရွှေမန်းက ဥပဒေကြမ်းကို ကော်မတီအနေနဲ့ တင်သွင်းဖို့ အဆုံးအဖြတ် ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးတင်မောင်ဦးဟာ သူတို့ရဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကာလ ပါတီ နိုင်ငံရေး လုပ်မှာကို ဘာကြောင့် ဥပဒေပြင်ဆင်ပြီး တားမြစ် ပိတ်ပင်ဖို့ လုပ်နေရသလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ သတင်းဌာန တစ်ခုကို ဦးတင်မောင်ဦး ပြောခဲ့တာက “ သမ္မတ အပါအဝင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးတွေက ပါတီ စည်းရုံးရေးတွေ လုပ်ဆောင်ခွင့်ရတယ် ဆိုပြီး ပြဋ္ဌာန်း ထားတာတွေ တွေ့နေရတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကလည်း နီးလာပြီဆိုတော့ ကိုယ်ကျိုးကြည့်ပြီး ဆောင်ရွက် သွားကြမှာစိုးလို့ ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေကို တင်သွင်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြောရရင် ဒီ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားတာဟာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ သူ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့် လာမယ့် ၂၀၁၆ မတ်လ မတိုင်ခင်အထိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အနားကို မကပ်နိုင်အောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လွှတ်တော်ထဲက သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့ရဲ့ တခြားဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ လက်ရှိ တင်သွင်းထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ဥပဒေမူကြမ်း ဒုတိယပိုင်းမှာ ပုဒ်မ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ ကို ပယ်ဖျက်ဖို့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ပုဒ်မ ၆၄ မှာ ခုလို ဖော်ပြထား ပါတယ်။ “နိုင်ငံတော် သမ္မတ သို့မဟုတ် ဒုတိယ သမ္မတ များသည် နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လျှင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ သို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတများအဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည့်နေ့မှ စ၍ မိမိတို့ ရာထူးသက်တမ်းအတွင်း ယင်းပါတီအဖွဲ့အစည်း၏ ပါတီလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ။” လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီပုဒ်မတွေကို ပယ်ဖျက်လိုက်ရင် လာမယ့် သမ္မတဟာ ပါတီက ထွက်စရာမလို၊ ပါတီနိုင်ငံရေး ဆက်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်တဲ့ လွှတ်တော်ထဲက ပြည်ခိုင်ဖြိုး အုပ်စုရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ကြည့်ရင် လက်ရှိသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ သူ့အစိုးရအဖွဲ့၊ သူ့ပြည်ခိုင်ဖြိုး အုပ်စုဟာ အစိုးရ သက်တမ်း မကုန်မချင်း ပါတီ နိုင်ငံရေး မလုပ်နဲ့၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီထဲ မလာနဲ့လို့ ဆိုထားသလို နောင် တက်လာ မယ့် သမ္မတကတော့ ပါတီ နိုင်ငံရေး လုပ်ခွင့်ပေးသင့်တယ် ဆိုပြီး ရှေ့နောက်မညီ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ သမ္မတလောင်းနေရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါတီထဲက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အုပ်စုနဲ့ လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း အုပ်စု သဘောထား ကွဲလွဲနေကြတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းမျိုး ထွက်ပေါ်နေတာ ကြာလှပါပြီ။ အခု စစ်အစိုးရလက်ထက်က ဥပဒေ (၇) ခု ပြင်ဆင်လိုတာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ထဲက ပုဒ်မ ၆၂ - ၆၃ - ၆၄ ပယ်ဖျက်လိုတာတွေကို ကြည့်ရင် သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်တဲ့ လွှတ်တော် ထဲက ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်အဖွဲ့ မျိုးကြီး သီချင်းကို ဆိုနေကြပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြ လိုက်ရပါတယ်။
“မလာပါနဲ့၊ သမ္မတကြီးရယ်၊ မလာခဲ့နဲ့ကွယ်၊ တို့ပါတီရဲ့ အတွင်းပိုင်း သဘောဟာ တကယ်ခက်ခဲပြီး ကြမ်းတယ်။ မလာနဲ့ မလာခဲ့နဲ့ကွယ်”။